Sir Dahsoon iyo saddexeeye jacayl... Qeybtii Koowaad Sheeko Xiiso Badan, La Soco Maalin Walboo Arbaco Ah.. - Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Sir Dahsoon iyo saddexeeye jacayl… Qeybtii Koowaad Sheeko Xiiso Badan, La Soco Maalin Walboo Arbaco Ah..
Published: April 27, 2016, 12:00 am
Inta aan gudaha u galin sheekadaan aad kobciye.com ka daalacan doontaan isbuuciiba mar waxaan akhristayaasheena sharafta leh la socod siineynaa in sheekadaan kobciye.com afar sanno ka hor laga akhristay balse aan dib uso celinay xiisaheeda awgeed si aay akhristayaasha uga bogtaan.
Tan kale waxan balan qaadeynaa inan sheekadaan dhameystiri doono sheekooyin qabyo naga ahaa aan dhawaan dib u bilaabi doono ayagana aan dhameystiri doono, webka kobciye.com siduu ahaan jiray iyo si kafiicana aad waxyaabo xiiso badan ugu dalaacan doontaan..
Billoowga Sheekadeenii Xiisaha Badneyd..
Waa ayaamo xusuus leh!
Waa ogaal lala yaabo!
Waa adkaysi muhiima!
Olol weeye I dhaafay!
Arrin aanan hilmaamin!
Waa albaab xirmay heedhe!
Waa ayaan helideedi!
Misna aaway dhaheeda!
Waa ilmaynta naftayda!
Misna oog shidadkeeda!
Waa abaabul kaceeda!
Umal weeye dhibaato
Aamus weeye qiyaasan
Ubixii lumay weeye
Waa xin aafo bilaabey
Dumar xeel la arooray
Xaasid uu andaqaaday
Qiso aamina weeye
Qalbiyaal is khilaafay
Iska eegay xumaanta
Ka ilmeeyey caloosha
Waa adkaysi adkaysi
Illin weeye Da’aysa
Akhri oo dhab u fiirso!
Waxaan u kallahay dugsigii quraanka ee aan sida caadada ah aadi jirey, waxaan fariistay booskaygii isla markaana bilaabay xifdinta casharka la iga rabo. Waxaa yimid macalinkii salaan ka dibna wuxuu bilaabay dhagaysashada casharka ardaydu ka baxayso. Iima ahayn caado inaan ka bixi waayo cashar laakiinse waxaa dhacday subaxdaa inaan gefay, isla markaana macalinkii soo qaatay ul iguna yiri “taago” oo uu ula jeedo gacanta taag, waan taagay saa wuxuu igu dhuftay jeedal aad u xanuun badan, mar labaad ayuu ii celiyay mar saddexaadna ku celiyay, waxaa indhahayga ka soo dareertay ilmo, wuxuu damcay inuu mar afraad ii celiyo laakiin waxaa yeeray dhawaaq; cod macalinkii soo jiitay dhegahiisa oo istaajiyay ushii la ila dhacayey, waxay tidhi “ ALLA BES” wuu eegay macalinkii mase waa ayaan oo indho naxsan ku soo eegaysa macalinkii illintuna ka soo dhowdahay. Wuxuu igu yidhi orod casharka si fiican u akhri oo ka soo bax, ayaanna waxba lama oran. Ardaydii oo la yaabban geesinimada ayaan iyo anigoo abaal ugu haya ayaa si wada jir ah ugu laabannay akhriskii quraanka.
Ayaan iyo aniga inkastooy da’deennu yarayd haddana waxaannu ahayn saaxiibbo is fahma oo dadka kale iskaga dhow, ma oran karo waynu is jcelayn waayo jacayl ba ma aannu aqoon, walaaltinimo ayaa naga dhaxaysay aad iyo aad u wayn, waxaan ahayn daris isku xaafad dhow markastoo aan dugsiga aadayno ama ka imanayno waan is raaci jirnay, badanaa anaa ku sii mari jirey xaafadooda. Waalidka na dhalay aad bay ugu faraxsanaayeen sida aan walaalo u nahay oo isku tixgalino inagoo caruur ah.
Wakhtigu waa sida hillaac oo degdegiisaa badan, sanadba sanad buu u dhiibey, xoogaa caqli iyo jir ahaanba waan u kornay, waxaannu dhamaynay quraankii kariimka ahaa markaan 10 jirsannay. Waalidkii na dhalay ayaa xaflad wayn inoogu qabtay dugsiga dhexdiisa halkaasoo la inoogu duceeyey, wali isma dhimin saaxiibtinimadeenii oo waxanu imika noqonnay sheeko wadaag aan waxba ukala qarsoonayn.
Inkastoo aan quraankii dhammaynay hadana anigu waxaan bilaabay naqtiinka quraanka iyo iskuul aan subixii aado. Ayaan iyaduna waxay gashay iskuul kale laakiin may bilaabin naqtiinka quraanka halkaana waxaa ku yaraaday is arageennii faraha badnaa waayo dugsigiina way ka baxday isku iskuulna ma nihin wakhti kaloo firaaqo oo aan is aragnaana ma jiirin.
Lasoco qeybaha danbe ee sheekada oo aad u xiiso badan
Qoraaga Sheekada Abwaan Xassan Cabdullaahi Xaashi “Timacade”
Sheekadaan waxeey xuquuqdeeda gaar u tahay kobciye.com
Toddobo iyo Toban Qodob oo kuu sahli kara in aad noqotid arday ku guuleesta waxbarashadiisa.
Sideen ku yeeshaa dabeecad soo jiidasho leh, 6 qodob Oo Kuu Sahlayo Inad Soo Jiidasho Yeelatid..
One Comment : Sir Dahsoon iyo saddexeeye jacayl… Qeybtii Koowaad Sheeko Xiiso Badan, La Soco Maalin Walboo Arbaco Ah..
Waaaw wa mhdsantihi kobciye haddi shekoyinki hore no sii wadi rabtan wa rjyna balantad qadeyn ina ofin dontan